ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကိုဖှဲ့စညျးကျူ | Apg29
ဥရောပတိုက်မှအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှခကျြခကျြကိုသမ္မတ Milos Zeman ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအဆိုအရဖှဲ့စညျးကျူးကျော်မှု။
ဒါဟာဥရောပတိုက်တွင်ရောက်ရှိမည်သူအများအပြားရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားမျှမပဋိပက္ခတွေရှိပါတယ်နေရာများတွင်ထံမှရောက်ရှိလာသောခြင်းမရှိဘဲ, ပင်သည်ရှုရိလူမဟုတ်သောကြောင့်, ဒုက္ခသည်များအဖြစ်ထကြွလွယ်သောလှိုင်းလုံးမျှမျှတတသိသာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပတ်သက်ပါဘူး။
ဤသည်ကိုဖှဲ့စညျးသောစီးပွားရေးရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, ဒါပေမယ့်လည်းရည်ရွယ်ချက်သည်ဥရောပကအစ္စလာမ်ဘာသာနှင့်မွတ်စလင်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြန့်နှံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာစနစ်တကျဘာသာရေးကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။
ပဲရစ်မြို့-အကြမ်းဖက်သမားများ၏အနည်းဆုံးနှစ်ခုဒါခေါ် "ဒုက္ခသည်တွေ" ခဲ့ကြသည့်အခါထို့ပြင်အကြမ်းဖက်သမားများနှင့်အတူဥရောပတိုက်များ၌မှ ISIS အဖွဲ့ဘို့လမ်းကိုဖွစျစနေိုတစ်ခုခုကျနော်တို့ပြီးသားကြုံတွေ့ခံစားကြပြီ။
ဤများအပြင်၌ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးအာသနန်းစံ Romson (ပါလီမန်အမတ်) ကအစိုးရ၏အာရုံယခုအဖြစ်ခိုလှုံခွင့်နှင့်လူဝင်မှုမိသားစုအတှကျဆွီဒင်ရဲ့ဧည့်ခံစွမ်းရည်မြှင့်တိုးမြှင့်သိသိသာသာပေါ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကြောင်းအင်တာဗျူးတွင်ပြောကြားခဲ့သည်သော "ဆွီဒင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလိုအပ်သည်။ " ဟုပြောသည်နိုင်ပါတယ်
2016 ခုနှစ်, တစ်အလေးအနက်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်။ ယရှေုတစ်ခုတာဝန်ပေးအပ်အသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်ထက် ပို. နှင့်သူ့အဘို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအနိုင်ရမှအရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အစဉ်အဆက်ထက်ပိုလိုအပ်ပါတယ်!
ယရှေုသညျလူအပေါငျးတို့ကိုချစ်လူတိုင်းကိုယ်တော်ထံသို့လာရန်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်စေချင်ပါသည်။ - ငါတို့တိုင်းပြည်ရောက်လိမ့်မည်သူကိုတောင်မှမူဆလင်များ။
source: ခကျြကိုသမ္မတ: ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကိုကျူးကျော်ဖွဲ့စည်း | အာသနန်းစံ Romson ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွီဒင်မှနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတိုးမြှင့်မယ်လို့
Vecka 25, onsdag 19 juni 2019 kl. 12:59